आज श्री शाके १९३९ बि.स. २०७४ साल चैत्र ३ गते शनिबार इश्वी सन २०१८ मार्च १७ तारीख चैत्र कृष्ण पक्ष औँशी तिथी चन्द्रमा कुम्भ राशिमा १३ः३१ बजे सम्म पश्चात मिन राशिमा सुर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु दर्शश्राद्ध घोडेजात्रा निशि बार्ने हलो बार्ने – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे
ईष्ट मित्र बिच सामान्य बादबिवादको योग रहेको छ । कार्यक्षेत्रमा दबावको सामना गर्नु पर्नेछ । मध्यान पश्चात मित्र तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । तात्कालिक यात्राको योग रहेकोछ ।
मित्र जनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्ने योग रहेको छ । साझेदारी कार्यका क्षेत्रमा आम्दानि उत्तम रहनेछ । मध्यान पश्चात आम्दानिको क्षेत्र सबल रहेता पनि कार्यको क्षेत्रमा भने त्यति मन लाग्ने छैन ।
सञ्चित रकम खर्चहुने योग रहेको छ । अरुको दबाबको कारण मानशिक समस्या आई पर्ने छन् । पठनपाठनमा भने समय राम्रो रहेको छ । मध्यान पश्चात नजिकका मित्रजनहरु बिचको सम्बन्ध टाढिन सक्ला । परीश्रमको राम्रो फल प्राप्त होला ।
पाथिभारा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! हेर्नुहोस् (जुन १३) जेठ ३० गते आईतबारको राशिफल